ဖြေပထမဦးစွာကျနော်တို့ချောထုတ်ကုန်မှီတိုင်အောင်ကုန်ကြမ်းမှသည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက် QC ဌာနရှိသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက် Inpsection ပြုလိမ့်မည်။ တတိယအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ထုတ်ပေးပို့ခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ဖောက်သည် personly စစ်ဆေးနေဘို့မလာလျှင်ကျနော်တို့စစ်ဆေးရေးသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ခြင်းကိုဗီဒီယိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
Q: warrenty ကော?
တစ်ဦးက: အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များဘဝက-Long ကကို Maintenance ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ 1 နှစ် warrenty ရှိခြင်း။ ကျနော်တို့အခမဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူသငျသညျပေးပါလိမ့်မယ်။
မေး: သင်ကုန်ပစ္စည်းများစစ်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အကူအညီပေးသလား?
ဖြေထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်စကားအတွင်းအားလုံးစက်တွေကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းအားလုံးစစ်ဆင်ရေးအကြံပြုချက်များနဲ့ Maintenance အဆိုပြုချက်ရှိခြင်းသောအင်္ဂလိပ်လက်စွဲ။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုပဲသင်ကဗီဒီယို, ပြရန်များကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏စက်ရုံသို့မဟုတ်သင့်စက်ရုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများအတွက်နေစဉ်မေတ္တာရပ်ခံလျှင်သင်သင်ပေးအခြားလမ်းဖြင့်သင်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျတယျ။
ဖြေကျနော်တို့အဖြစ်ကောင်းစွာအခမဲ့သောဤစက်များအတွက်အချို့လိုအပ်ကိရိယာတွေကို tool ကို box ထဲမှာသင့်ရဲ့အမိန့် wtih အတူတကွပေးပို့ပါလိမ့်မည်, သင့်အမိန့်နှင့်အတူအချို့သောမြန်ဆန် wear အစိတ်အပိုင်းများကိုခိုင်ခံ့စေမည်။ ကျနော်တို့ကစာရင်းနှင့်အတူလက်စွဲအတွင်းဆွဲအားလုံးအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ သင်ရုံကိုအနာဂတျတှငျသင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများအမှတ်ပြောပြနိုင်ဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှကိုလမ်းထောကျပံ့ပေးနိုငျတယျ။ ထိုမှတပါး, စက်ခုတ်ဘီဗဲလ်ကိရိယာများနှင့် INSERT beveling အဘို့, ဒါဟာမျိုးစားသုံးသူစက်တွေအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအမြဲ easyly လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက်ကိုရှာဖွေနိုင်သည့်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအမှတ်တံဆိပ်ကိုတောင်းခံပါ။
မေး: သင့် Delivery နေ့စွဲကဘာလဲ?
A: ပုံမှန်မော်ဒယ်များများအတွက် 5-15 ရက်ကြာပါသည်။ နှင့်စိတ်ကြိုက်စက်များအတွက် 25-60 ရက်။
Q: ဒီစက်သို့မဟုတ် silimars အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်မလား?
ဖြေ Pls စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အကွက်အောက်ရှိဖို့၌သင်တို့၏မေးခွန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များချရေးပါ။ ကျနော်တို့ 8 နာရီအတွက်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုစစ်ဆေး reply ပါလိမ့်မယ်။